China Led Shoebox China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led Shoebox - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Led Shoebox)
240W LED Shoebox Light nwere nzọụkwụ 3 nke nkedo 20% / 50% / 75% / 100% ikuku ntanetị, ruo 240w, dochie 400w-500w metal halide & sodium dị elu, ihe nkwụsị zuru okè maka nkwụnye ngwongwo, okporo ụzọ, ụgbọ ala ụlọ ahịa na ogige ntụrụndụ. 240W LED Shoebox Ngwado sitere na Bbier bụ iji dochie 100W na 1000W Metal...
IKE NKWU: Bbier 300W Led Shoebox Ngwunye na-egbukepụ egbuke egbuke na ọkụ 135lm / watt, 1000W HPS / MH dochie. MGBE OWU OTU: Bbier Ejiri ejiji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ nke a na-eme ka ọ bụrụ oge 50,000. MGBE A GA-EKWU: Bbier 300 Watt Led Shoebox Fixture na-abịa site na nkedo na-adaba ngwa ngwa 2-3 / 8 nke anụ ọhịa...
Anyị 300W Ejiri akpụkpọ ụkwụ na- abịa na ihe ntanetịpụ foto nke ọhụụ nke na-achọpụta ihu igwe na ike ọkụ na / na-akpaghị aka. Nke a na-eji akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na-enye 41600 Lumens na 5000K Lightlight. Nke a dugara Area Light mgbede Iji Dawn na-onwem na a ileghara fitter na ileghara fitter na-kewapụrụ n'ebe...
IP65 240W na-adọba ụgbọala dịka 130lm / w
IP65 240W na-adọba ụgbọala dịka 130lm / w EKWU NDỊ ỌZỌ: Bbier na- eduzi ebe a na-adọba ụgbọala nnukwu na-egbuke egbuke na elu lumens irè 135lm / watt, 700W HPS / MH nnọchi. MGBE OGE OGE: Bbier na- eduzi okporo ụzọ akpụkpọ ụkwụ na-eme ka a mara mma nke ọma maka awa 50,000 nke ndụ. MGBE AHỤ AKA: Bbier Led street Light...
150W na-eduzi ìhè akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ihe mmetụta
150W na-eduzi ìhè akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na ihe mmetụta IKE NKWU: Bbier na-eme ka ìhè na- adọba ụgbọala na- egbuke egbuke site na fotocell super bright with high lumens effective 135lm / watt, 400W HPS / MH replace. MGBE OWU OTU : Bbier 150W eduziri akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ dị mma nhazi nhazi maka awa 50,000 nke...
Led Shoebox 300W Led Shoebox Led Shobebox Light Dlc Led Shoebox Street Led Street Light Shoebox led shoebox fixture led shoebox retrofit 300 Watt Led Shoebox Fixture